Arsenal Oo Go'an Ka Qaadatay Mustaqbalka Xidiga Eddie Nketiah
HomeWararka CiyaarahaArsenal oo go’an ka qaadatay Mustaqbalka Xidiga Eddie Nketiah
Arsenal oo go’an ka qaadatay Mustaqbalka Xidiga Eddie Nketiah
May 3, 2022 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Suuqa kala iibsiga 0
Arsenal ayaa sameyn doonta isku daygii ugu dambeeyay oo ay ku qancineyso weeraryahankeeda Eddie Nketiah inuu sii joogo kooxda wixii ka dambeeya xagaaga.
22-sano jirkaan qandaraaskiisu wuxuu dhacayaa bisha June, wuxuuna ilaa hadda diiday heshiis kordhin badan oo ay u soo bandhigtay kooxda Waqooyiga London.
Nketiah wuxuu raadinayaa dammaanad qaadka fursadaha kooxdiisa koowaad ee Emirates Stadium, gaar ahaan haddii Gunners ay go’aansato inay Gabriel Jesus kala soo wareegto Manchester City, sida dhawaan la sheegay.
Si kastaba ha ahaatee, ka dib markii uu hore ugu dhibtoonayay inuu boos joogto ah ka helo kooxda Arsenal, weeraryahanka ayaa ku soo bilowday afar kulan oo isku xigta tan iyo markii uu hogaanka u dhiibay Southampton bishii April.
Sababo la xiriira kor u kaca fursadaha iyo qaab ciyaareedkiisa, Daily Mail ayaa ku warameysa in madaxda Arsenal ay sameyn doonaan dadaalkii ugu dambeeyay oo ay ku qancinayaan Nketiah inuu saxiixo heshiis cusub si ay u kordhiyaan joogitaankiisa.
Si kastaba ha ahaatee, warbixinta ayaa muujineysa sida Nketiah la sheegay inuu sii wadi doono ilaa dhamaadka ololaha si looga hadlo mustaqbalkiisa, iyadoo kooxo dhowr ah la sheegay inay xiiseynayaan saxiixiisa heshiis bilaash ah marka uu xilli ciyaareedka soo idlaado, oo ay ku jirto Crystal.